पोजेटिभपछि फेरी पोजेटिभको पोजेटिभ अनुभव - Vishwa News
१९ असार २०७७, शुक्रबार ० बिचार / प्रतिक्रिया
बिदुर बिष्ट, न्युयोर्क
कोरोना भाइरससँगै भाईरल हुन त मन थिएन तथापी आफ्नै केही प्रत्यक्ष अनुभव राखेर आईडल बनौं कि भन्ने कोशिस गरेको मात्र हुँ । यस विषयको बिज्ञ त होईन तर अनभिज्ञ पनि छैन – म !
कोरोनाको कहर फैलने शुरूवाति दिनहरूमा मैले प्राय: हाँसो ठट्यौलो गर्दै मजाक मै यो भाईरसलाई उडाई रहेको थिएँ । तर जव मार्चको २१ तारिख एक्कासी हनहन्ती ज्वरो आयो तब मलाई झल्यॉस्स याद आयो कि कतै यो भाईरस मेरो कोठा त पसेन ? दुई दिन ज्वरो, चार दिन शरीर सिथिल, आठ दिन गन्ध र स्वाद बिलय हुँदै सोह्रो दिनसम्म सुख्खा खोकीले सतायो । अस्पताल जाउ कि नजाऊ भन्ने दोमन गर्दै पिडासँग घरमै भाइरससँग लडी रहें । अन्तत: शारीरिक अवस्था सुधार हुँदै गरेपछि बिजय हासिल गरिएको ठान्दै आराम भएको खुसीयाली मनॉए । तर त्यो लडाई निशस्त्र थिएन । बेसार, अदुवा पानी, कागती, महको रस, टिम्मुर र ज्वानोको झोल लगायत तातो पानीको बाफ १० मिनेट दिनको तिन पटकसम्म लिन थालेपछि मात्र जित हासिल गरेको थिएँ । घरमा सँगै साथमा रहेका श्रीमती, छोराछोरी पनि म मार्फत संक्रमित भएका थिए होलान् तर ती सबैले दुई चार दिन – दुई चार पटक हाछ्यूं गरेर पचाई दिए । मलाई भने फोक्सोको समस्या पहिलेदेखि नै रहेकोले कमजोर ठानेर आक्रमण गरेको होला भन्ने महसुस् गरें । सबैले अस्पताल जाने सल्लाह दिए । सबै तोकिएका लक्षणहरु ममा देखिएको थियो । म कमजोर अवस्थामा नभएपनि मनोबल दह्रो थियो । एक थोपा विचलित भइन । म कमजोरका बाबजुद ज्याद्रो पनि छु भन्ने कुरा सायद त्यो कोरोना भाइरसलाई थाहा थिएन होला, मैले पेलेरै पाखा लगाई दिएँ ।
जसरी हाम्रो घर-कोठा भित्र अकस्मात चोर डाँका प्रवेश गर्छ, हाम्रो पहिलो प्रतिकृया उसलाई त्यहाँबाट भगाउने र थप मद्दतको लागि हारगुहार माग्ने गरिन्छ । त्यसरी नै जब हाम्रो शरीर भित्र कुनै शत्रु किटाणुहरू प्रवेश गर्छन तब हाम्रो शरीर भित्र रहेका सिपाही किटाणुहरूले हाम्रो एरिया वा राज्यमा नआईजा भनेर धकेलेर बाहिर निकाल्दा त्यसको संकेतका रूपमा हाछ्यूं आउने गर्दछ । यदि धकेल्न नसक्ने गरी मजबुत तरिकाले बाह्य शत्रु किटाणुहरू प्रवेश गरेका छन भने त्यहाँ दुबै तर्फ बीच भिषण लडाई हुन्छ । जसरी सेनाहरू बीच युद्ध हुँदा त्यो युद्ध मैदानमा आगो बल्ने र जल्ने बिनास हुने गर्दछ त्यसरी नै शरीर भित्रका भित्र किटाणुहरू बीच लडाई हुँदा ज्वरो आउने, थकाई लाग्ने, कमजोर हुने गर्दछ । त्यस्तो समयमा आगोलाई निभाउन पानी प्रसस्त पिउनु पर्ने हुन्छ । थाकेका कमजोर भएका स्वदेशी सेनाहरूलाई खुराक दिनु पर्दछ । मनोबल दिनु पर्दछ । बिदेश पश्चिमा तिर कसैले हाछ्यूं गर्दा नजिकमा रहेको वा थाहा पाएको ब्यक्तिले “Bless You” भन्ने गर्दछन तर बास्तवमा उनीहरूले “Brave You” भन्दा उपयूक्त हुने थियो । किनकि शरीरको सेनाले बाहिरी हमला रोक्न खोजेको संकेत हो त्यो ।हाम्रो पुर्वीय संस्कारमा “चिरञ्जिवी” भनेर कामना गरिन्छ ।
जब कोरोना भाईरसको बारेमा संसार अनभिज्ञ थियो । यसको रोकथाम र उपचारको उपाय बारे मिश्रित र अनिश्चित धारणा आईरहेको थियो । त्यतिबेला यो भाईरससंग लड्न आत्मबल र आत्मरक्षा अपनाउनु बाहेक अरू उपाय थिएन । तर जो जति संक्रमित मानिसहरूलाई उपचारको उपाय अस्पतालहरूमा उपलब्ध नै थिएन भने किन अत्तालिएर अस्पतालहरूमा पुगेका थिए ? किन अधिकॉश मानिसहरूको मृत्यू तिनै स्वास्थ्यसंग संबन्धित भवनहरू भित्रै भएका थिए ? अघिकॉश घर मै बसेर लडाई लडेकाहरू बॉच्न सफल भएका थिए, किन ? यी प्रश्नहरूको उत्तर मेरो अनुभवमा आत्मनिर्णयको कमीले गर्दा भएको भन्ने ठम्याई छ । यी बाहेक अन्य सतर्कताका बिधिहरूको बारेमा पनि शंका, उपशंका र बिभिन्न मतहरू आउने गरे झैं मैले पनि शुरूका दिनदेखि नै मास्क लगाउने र ६ फिटको सामाजिक दुरी कायम गर्ने संबन्धमा फरक बुझेको थिए । जस्तै; मानिसको शरीरमा भाईरस प्रवेश गर्नमा रोकावट के मास्कले मात्र गर्ने हो र ? यो भाईरस यूक्त Airosole Droplets हावाको माध्यमबाट शरीर भित्र प्रवेश गर्ने अनेकौं उपायहरू छन । सिर्फ श्वास प्रश्वास र छुवाछुतमा मात्र सिमित छैन । मानौं मास्कको प्रयोगले रोकावट हुने हो भने ६ फीटको दुरीमा किन रहनु पर्यो ? के भाईरस ६ फिट टाढासम्म पुग्न सक्ने तर ६.५ वा ७ फीट पर पुग्न नसक्ने बैज्ञानिक तथ्य प्रमाण छन ? स्वास्थ्य बिज्ञानका आधारमा यदि कुनै ब्यक्तीले हाछ्यूं गर्यो भने बाहिर निस्कदा करिव १०० माईलस प्रति घन्टाको द्रुत गतिमा १९ देखि २६ फिट दुरी परसम्म उछ्छिटिएर पुग्न सक्ने बताउँछन । अब के यो दुरी कायम गरेर साध्य हुन्छ ? हाछ्यूं गर्दा Bless you भनेर बस्ने कि तर्केर हिड्ने ? कि आफु मजबुत बनेर बस्ने ? तपाईको रोगसंग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो छ भने कसैले मुखैमा आएर हाछ्यूं गर्यो भने पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन । यी मास्क र ६ फिटे कुराको किन लामो बहस गरिरहनु ? तेसैले मैले हालै कोभिड-१९ भाईरसको परिक्षण गर्नु भन्दा मेरो आफनै क्षमताको परिक्षण गर्न उपयूक्त ठानें । जसलाई एन्टीबडी टेस्ट भनिन्छ । जसबाट थाहा हुन्छ कि तपाईलाई पहिला कोरोना संक्रमण भएको थियो भने पनि त्यसलाई आन्तरिक रूपमा परास्त गरेको वा अब हुन सक्ने आक्रमणलाई रोकथाम गर्न पर्याप्त क्षमता धारण गरेको अवस्था छ वा छैन भन्ने मोटामोटी अन्दाज दिलाउँछ । मेरो केसमा भने २.७४ S/C रहेको पाईयो, जुन सकारात्मक (पोजेटिभ) नतिजा थियो ।
अन्तमा अमेरिकनहरूको औसत उचाई ६ फिटको हुन्छ भन्दैमा यी ६ फिटेहरूको मखुन्डोधारी कुरा सुन्नु भन्दा हाम्रा बाजे बराजू पुर्खाहरू बिना खोप र औषधोपचारमा पनि १०० बर्ष भन्दा ज्यादा किन र कसरी बॉच्ने गर्दथे ? भनेर सोधखोज र श्रवण मनन गरौं । प्रकृतिसंग मानिसको आकृति कसरी घुलमिल गर्ने तिर सोचौं । यसैमा मानव जातीको कल्याण हुनेछ । डर, त्रास, भ्रम र भयमा बॉच्नबाट मुक्ति पाउन प्राकृतिक आयूर्वेदिक र योगिक जीवनशैली अपनाऔं । शरीरको आन्तरिक सैनिकहरूलाई मजबुत पार्न स्वस्थबर्धक खाना पानीको सेवन गरौ । शान्त र निरामय जीवन बिताऔ !
चौथो नेपाल आईस सिन्धु कप फुटवल प्रतियोगिता
साउदीमा एकै स्थानमा ३४ नेपालीलाई कोरोना संक्रमण
जम्बु कश्मीर अब केन्द्र शासित प्रदेश, मोदी कदमले काम गर्ला ?